Juno အာကာသစုံစမ်းမှုကဂျူပီတာရဲ့တိုင်တွေရဲ့လှပမှုကိုပြတယ် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ဂျူပီတာ၏တိုင်နှစ်ခု (ဂျူနို) မှခေါ်ဆောင်သွားသည်။
လူသားတို့၏သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ငါတို့နေတဲ့ the ည့်ခန်းကနေဂျူပီတာရဲ့ဝင်ရိုးစွန်းကိုကြည့်နိုင်တယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကီလိုမီတာ ၅၈၈ သန်းထက်မပိုသောအကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီးဓာတ်ငွေ့ရှိသောဂြိုဟ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ NASA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုဖြစ်တဲ့ "Juno" အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူရိုက်ယူခဲ့သည့်ပုံများအရနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ရှိမည်သည့်အခြားဂြိုဟ်ပေါ်တွင်မျှယခုထိမမြင်နိုင်သောအပြုအမူနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောဘဲဥပုံပုံသဏ္cyclာန်ရှိသည်။ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ အချင်း ၁၄၀၀ ကီလိုမီတာအချင်းရှိသောကြီးမားသောမုန်တိုင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်.
ပုံ - Craig Sparks
အထင်ကြီးလောက်သောမုန်တိုင်းများသာရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်မမြင်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ကီလိုမီတာ ၇၀၀၀ အကွာအဝေးရှိသောတိမ်တိုက်သည်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ကောင်းစွာကျန်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပ်များမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ကိုမသိရသေးပါ။ သို့သော်လေထု၏အတွင်းပိုင်းအလွှာများ၏အပူချိန်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်သည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဒေသများမှထွက်ရှိသောအမိုးနီးယားပမာဏသည်၎င်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
အာကာသစုံစမ်းမှု» Juno » လေထုထဲသို့ကျသောအီလက်ထရွန်များ၏ရေချိုးခန်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်, သောဓါတ်ငွေ့ရောနေသောဂြိုဟ်၏ပြင်းထန်သောမြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုက NASA ၏ Pioneer 11 စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်မိုင်ပေါင်း ၂၇၀၀၀ မိုင်ကျော်လွန်သွားသော်လည်း“ Juno” သည်ဆယ်ဆပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ခက်ခဲသောသံလိုက်စက်ကွင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန်မခက်ခဲပါ။ ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည် 7.766 gaussအခုတွက်ချက်ခဲ့သည့်နှစ်ဆ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှိသောဂြိုဟ်ပေါ်တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသိရှိရန်ကမ္ဘာမြေ၏သံလိုက်စက်ကွင်း၏ပြင်းထန်မှုသည် ၁၀၀ gauss ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဘားသံလိုက်၏ဆွဲအားနှင့် ၀ င်ရိုးနှင့်ပတ်သက်သော ၁၁ ဒီဂရီညီမျှသည်။ ကမ္ဘာ၏လည်ပတ်။
ဂျူပီတာဂြိုလ်ပေါ်မုန်တိုင်း။ Image - NASA
ဂျူပီတာ၏တောင်ဝင်ရိုးစွန်း, » Juno »အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ Image - NASA
ဘတ်စကတ်ဘောကွင်း၏အရွယ်အစားဖြစ်သောဂျူနိုသည်အာကာသယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုသာအသုံးပြုပါ ကြီးမားသောပြားများကဖမ်းမိ။ ဂျူပီတာမှထုတ်လွှတ်သောရောင်ခြည်များမှကင်မရာများနှင့်အခြားသိပ္ပံဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုတိုက်တေနီယမ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့် သူ၏ "မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်" စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တုံးကြီးရှိမရှိသိရန်လေထု၏အပြင်ဘက်အလွှာထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါ၎င်းသည် ၂၀၁၈၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ရှိခဲ့လျှင်၊ ဂျူပီတာသည်ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကမ္ဘာဂြိုဟ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များအားအစောပိုင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်တွင်မည်သည့်အရာများတည်ရှိသည်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ရုပ်ပုံများ » ရုပ်ပုံများ - ဂျူနိုအာကာသယာဉ်မှူးကဂျူပီတာရဲ့ထမ်းပိုးတွေရဲ့လှပမှုကိုပြတယ်